Wasiirka Difaaca oo sheegay in hadda kaddib Ciidamada Xoogga tababar lagu siinayo gudaha Dalka – idalenews.com
Wasiirka Difaaca oo sheegay in hadda kaddib Ciidamada Xoogga tababar lagu siinayo gudaha Dalka
Dowladaha Soomaaliya iyo Ugandha ayaa isku raacay in wixii hadda ka dambeeya Ciidamada ka mid noqonaya Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee markii hore lagu tababari jiray dalka Uganda loo soo wareejiyo gudaha Soomaaliya iyadoo ciidamada ay si wadajir ah u tababari doonaan Saraakiisha Midowga Yurub iyo Saraakiishii hore ee Soomaaliya.
Heshiiskan ay wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo Uganda ayaa Muhiimadiisu waxa ay tahay in hadda wixii ka dambeeya ciidamada Soomaaliya lagu tababaro gudaha dalkeenna Soomaaliya halka markii hore lagu soo tababari jiray dalalka dariska la ah Soomaaliya.
Sidoo kale heshiiska ayaa lagu xusay in Saraakiisha Midowga Yurub ee Ciidamada ku tababari jiray dalka Uganda ay yimaadaan gudaha Soomaaliya si ay Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya ugu tababaraan dalkeenna, iyadoo Midowga Yurub uu Maalgeliyo tababarada Ciidamada.
Heshiiskan ayaa yimid kaddib markii wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Gaashaandhigga uu tagay Magaalada Kampala ee Dalka Uganda iyadoo Wasiirkuna Wadahadallo Arrintaasi ku aadan uu la qaatay dhiggiisa dalka Uganda iyo Taliyaha Ciidamada dalkaasi.
“Wadahadalkeenu waxa uu ku qotomay sidii Tababarada Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya loogu soo wareejin lahaa gudaha dalka, arrintaasina waan isku afgaranay sidoo kale waxaan isku raacnay in saraakiisha ama Leyli Sarkaalka lagu soo tababaro dalka Uganda’’ ayuu yiri Wasiirka Difaaca Soomaaliya isagoo ku sugan Magaalada Nairobi.
AKHRISO :- Magacyadda Fanaaniinta soomaalida ee ugu Shacbiyadda badan 2013:-